Ny UNICEF dia miantoka ny fitohizan'ireo tolotra ara-pahasalamana ho famonjena aina
20 Aogositra 2020
Ny coronavirus dia nisy fiantraikany teo amin’ny sampan-draharaha ara-pahasalamana ary nampihena ny fifantohana sy ny fanohanana ireo tobim-pahasalamana fototra. Any Madagasikara ary toy ny any amin’ny firenena rehetra maneran-tany dia nifantoka tamin’ny ady amin’ny COVID-19 ireo asa rehetra.
Tany amin'ireo firenena manana rafitra ara-pahasalamana marefo tokoa mantsy dia nitarika fanelingelenana teo amin’ny rohim-pamatsiana fitaovana ara-pahasalamana ny COVID-19 ary nitarika tsindry teo amin’ny lafiny ara-bola sy teo amin’ireo mpiasa ihany koa. Ny fihiboana, ny tsy fahafahana mivezivezy amin’ny alina, ny fitsaharan’ny fitaterana ary ny tahotry ny vondrom-piaraha-monina amin’ny mety hahazoan’izy ireo ilay otrik’aretina dia nampidina ny tahan’ny olona manantona tobim-pahasalamana. Kanefa, ny zaza eto Madagasikara toy ny any an-toeran-kafa dia lasibatry ny aretina efa fahita toy ny aretim-pivalanana, aretin’ny taovam-pisefoana, tazomoka, sy kitrotro, sns ... ary mahafaty azy ireo kokoa nohon’ny COVID-19 izany.
Izany toe-javatra izany sy ho fanohanana ny mponina Malagasy no nahatonga ny UNICEF nifanome tanana tsy ankiato tamin’ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka mba hanohizana ireo tolotra ara-pahasalamana mifandraika amin'ny fahavelomana sy ny fahasalaman'ny zaza, ny vehivavy ary ny fianakaviana iray manontolo mandritra ny valan’aretina.
Noho izany, vaksiny miisa 7 77.820 no notsinjaraina manerana ny nosy mba hafahana mameno ny filàna amin’ny fanaovam-baksiny mahazatra ho an’ny dimy volana ho avy. Ho fanampin'izany, zaza vao teraka miisa 675 000 no hisitraka ny fikarakarana ny tadim-poitra manerana an'i Madagasikara amin'ny alàlan'ny fanolorana chlorhexidine. Toeram-pitsaboana maherin'ny 80 no vatsiana fitaovana sy fanafody mba hikarakarana vehivavy bevohoka miisa 30 000 mandritra ny fizaham-pahasalamana mialoha sy aorian’ny fiterahana ary hiantohana ny fahasalaman'ny tanora 15 000. Notsinjaraina teny anivon’ny tobim-pahasalamana fototra ny fanafody entina mandray an-tanana ireo aretin'ny taovam-pisefoana mahery vaika miisa 28 000, aretim-pivalanana 40 000 ary tazomoka eo amin’ny akizy latsaky ny 5 taona miisa 50.000.
Ireo fanomezana ireo dia tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny drafitra ho an'ny fitohizan'ny tolotra mikasika ny fanjarian-tsakafo sy fanolorana fitsaboana ho an’ny reny, ny zaza vao teraka, ny ankizy sy ny tanora (SMNIA-N), indrindra ireo tena marefo avy amin’ny distrika 49. Ho atao laharam-pahamehana izany manomboka ny volana aogositra 2020 ka hatramin’ny volana janoary 2021 ary 2 tapitrisa dolara mahery no hoampiasaina amin’izany. Fanampiana natokana bebe kokoa ho an’ny zaza latsaky ny dimy taona no natolotra ho an’ny distrika valo ao amin'ny faritra telo (Anosy, Androy ary Betsiboka) izay ahitana tondro ratsy indrindra momba ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary ianjadian’ny haintany (Anosy sy Androy).
Ho fanampin'izany, ny UNICEF izay miara-miasa amin’ny GAVI, dia nanolotra fitaovana entina miaro-tena (EPI) (arovava, akanjo manokana, gan-tanana, satro-doha ary aron’akanjo plastika) izay mitentina maherin’ny $ 375 000. Ny Minisiteran'ny Fahasalamana no nanolorana ireo fitaovana ireo izay entina mamatsy ny mpiasan’ny fahasalamana, hahafahan’izy ireo manohy ny asa fanaovana vakisiny eny anivon’ny faritra efatra 4 (Analamanga, Atsinanana, Aloatra Mangoro ary Analanjirofo) mandritra izao ady amin’ny COVID-19 izao.